Awdaley ayaan daridaada ma maantaa laga taagey dushaada taaladii mujrimiinta SNM | AWDALSTATE.COM – The First and the Official
Awdaley ayaan daridaada ma maantaa laga taagey dushaada taaladii mujrimiinta SNM	Posted on November 21, 2011
Awdaley ayaan daridaada ma maantaa laga taagey dushaada taaladii mujrimiinta SNM
Labaatan sanno iyo dheeraad baa kasoo wareegtey tan iyo maalintii laga taagey waqooyiga calankaa sakhraanka iyo saqajaanku keeney ee SNM ee loogu magac darey Somaliland. Intaa in leeg baa kasoo wareegtay tan iyo bilowgii qodida god dheer oo lagu rido xaqa reer Awdal. Intaa in leeg baa kasoo wareegtay tan iyo maalintii SNM xasuuqdey kumaankum reer Awdal ah. Maantaana u dambeysey oo taalo looga taagey bartii waxbarashada ee Sheekh Cali jowhar si loo qariyo calanka Awdal State ee laga taagey buurta Saw koradeeda.
Awdalley ayaan daridaada ma maantaa laga taagey dushaada taaladii kuwii diley ee xasuuqey dadkaaga. Awdaley afar (4) qof oo maskaxdoodii iyo garaadkii gadabuursi lagaga meydhay Hargeysa ayaa dhigey taaladaa mujrimiinta oo sharaftaadii ku xaraashey shilimaad uu Siiraanyo siiyay weyse dhamaan oo geesiyaasha Awdal State ayaa tuuri taaladaa iyo calankooda oo arini waxey ku dambeyn kana sib kana saar.
Gudunta badhkeed baa inagu jirta ee inama goyseen;
Ma fileyn laba todobaad dabadeed ka dib markii buurta Saw Dusheeda laga taagey calankeena qurxoon ee Awdal State in hadana taalo looga taago mujrimiintii SNM Borama dhexdeeda. Ma fileyn bartii aqoonteena ee dugsigii Sheekh Cali jowhar in taalo looga sameeyo kuwii laayay dadkeena ee dhiiga ku meydhey. Ma fileyn in magacii sheekhal baladkeena lala doonto mujaahaliin laayay dad muslimiin ah. Ma fileyn in magac loogu sameeyo garaad xumayaal dhagarqabayaal ah Borama gudaheeda. Ma fileyn in agoontii aabayaashood xaqdarada snm ku leysey hortooda la yidhaahdo taalaan u dhiseynaa kuwii diley dadkiina.
Rag aan aqoon buuran laheyn oo SNM la yidhaahdo oo adeegsanaya dadkeena ayaa inoo dhamey oo ceebtaa keenay horteena. Dhuuni qaatayaal ay u horeeyaan ina Aw Cali iyo Ismaaciil iyo Gadabuursi jileycii ayaa maanta ka taagey taalada mujrimiinta caradii Awdal State. Xoogaa aan u tuuro dhuuni qaatayaasha duliga dul saarey magacii Gadabuursi ee shaasheeyay sharaftii barta aqoontii la inagu yaqaaney iyo magacii sheekhul baladkeena.
Ina Aw Caliyow Siiraanyaa lagu sheegey inuuna wax xasuusan ee hadii aad inyar dhaanto bal xasuuso hadalkaagii aad BBC-da ka sheegtay ee odhanaayey; “Nin SNM tol u tahey umma baahna tol…” cajiib !!!
Waxaan filaayay in ka dib markii SNM kaa xidhatay albaabada inaad garatey abtirsiinta oo nin tol-leh oo Gadabuursi u dhaata noqon doonto. Ma fileynin adiga oo horseed ka ahaa sideedii (8) kun ee SNM ku leysey carrada Awdal inaad maantana u horseedo taalo loo dhiso mujrimiintii tolkaa ee SNM ood waliba hadal ka jeediso agoontii horteeda. Ogow in maanta laga bilaabo lagu yidhaahdo fule-aan-tol-laheyn ileen tolkaa waa SNM. Waanan ogaaney inaad tahay lagu shaqeyste tolkii ka horjeestay oo SNM u wakiil ah.
Ismaaciilow tana waa u gaar labadeena;
Garan maayo dhan aan ka bilaabo oo dhiigaa I karaaya Ismaaciilow ee xoogaa aan kuu sheego aan la wadaago tolkeen;
Agoontii Dilla iyo dusheeda, Jaaraa-Horoto iyo tuli kuwa jiifa, Ceelbardaale kuwa dhufeyska ku waabariistey ee xaq darida lagu gubey beerahoodii dadkoodiina qeyrkaa ku laayay, kuwii aabayaashood Idhanka lagu laayay, kuwii qalooc lagu xasuuqey iyo dhamaan tolkeen sankey kaa hestaane ogow waana siduu yidhi horjoogahaagu …….UFUUUUUUUF…..
Ismaaciilow hadii aad garanweydey inaad sharaftii tolkeen dhowrto ood ka raacdey kuwii laayay dadkooda ood taalo u taagtey, magacii tolkeen lahaa taaladii SNM ka dul taagto ogow inaad adigana taariikhda aad tolkeen ku leedahay madoobaatay. Adigaa ka doortey tolkaa inaad la jaanqaado shisheeye ee cidna wax maad yeelin ee adigey ku jirtaa.
Agoontii aabayaashood SNM xaqdarada ku xasuuqdey, hooyooyinkii agoonta korinaayay, Kuwii Ceelbardaale lagu laayey iyo kuwa ilaa hadadaa aan qoraalkan qoraayo ku waabariistey dhufeyska ee tolkeen adigey aargoosi kaa filayeen ee marnaba ma fileyn inaad u horseedo taalo mujrimiintii dhagarqabayaasha ahaa looga taago carada Awdal State.
Ismaaciilow, xabaalaha ka buuxa Dilla iyo dusheeda, Ceelbardaale hareerteeda, daafaha Idhanka iyo Qalooc waar damiirkaagu yaraa sideed u ilowdey. Ismaaciilow waxaan filaayay inaad faataxada u marto tolkeen kuwii SNM xasuuqdey ee damqashadaadu xumaa sideed agoonta horteeda uga khudbadeysey ood u amaantey mujrimiinta.
Ismaaciilow ogow kali baad ku tahay arintaa mujrimiinta. Kumaankum geesiyaal ah oo tolkeen ah ayaa kugu xeersan oo qaadan waayey Siiraanyeynta aad tolka la dhex mareysee waa waxaad ka gurtaaaaaaaa.
Wasiir ku sheegyada kale iyo kuwa ku jira gododka (golayaasha);
Kuwa horseedka u ah fulinta qadiyada beesha dhexe ee shilimaadka raacey ee duminaaya sharafta Gadabuursi yagaa doortey iney sharafta iska qaadaan ee yagana aan idhaahdo;
OOPS… gamcihii baa diidey iney wax qoraan….. raali ahaada…. Markaan weydiiyay sidey wax u jiraana, waxey ku jawaabeen……” Hoos hanoo dhigin….” Akhristayaalow wixii aan ka qori lahaa jileyca Gadabuursi waxa diidey gamcaha ee raali ahaada. Hoos u dhigi maayo qoraalkeyga oo macno buuran beyna laheyn mana istaahilaan kalmad ee yaga sidaa aan ku dhaafo.
Odoyaasha Gadabuursi ee lagu hadey shilimaadka yaga wax ka qori maayo oo taariikhdaan u deyn oo dambigey ka galeen gadabuursi shaaca ka qaadi. Taariikhdu ma qarsoonto, nin walba wuxuu galey taariikhdaa cadeyni.
Ha ogaadaan dabadhilifyadu in hadii loogu tumo meesha caamka ah ee Hargeysa ku taala ee magaca dheer leh oo liilalow loogu heeso, iney naftood-hurayaashii mujaahidiinta ahaa ee xaqdarida SNM ku leysey malaaiigtu janada ugu heesto “Salaaman Salaaman….”
Ku socoto dadweynaha reer awdal;
Walaalahayow waan kawada dharagsanahay sida shisheeye inoo bahdilayo yaga oo adeegsanaya dadkeena. Wax la inoola hadheyna ma jirto oo maanta oo u dambeysey wataa sharafteenii godka madow lagu ridey. Walaalayaalow kuwii dadkeena diley ee xasuuqey in maanta horteena taalo looga taago inagaa ku sugney. Dhiigii haldoorkii Gadabuursi oo qoyan in la inoogu daro taalo aan u taagno mujrimiintii inagaa ku sugney. Kuwa gaajada ku eegey ee u gurmanwaayay dadkeena abaaruhu hayaan inaan taalo u dhigno inagaa ku sugney. Kuweena haraadka u surmiyay eeku eegaya inaan taalo u dhisno inagaa ku sugney.
Walaalayaalow magaca iyo sharaftii Gadabuursi lahaa in la baabiiyo ayaa SNM u gundatay yaga oo ku shaqeysanaya dhowr shisheeye kalkaal ah oo shilin ka doortey tolnimadii Gadabuursi. Walaalahayow yaan la iloobin sharafta Gadabuursi. Waa Ilaahey mahadii dhalin baa usoo kacdey soo celinta magaca Gadabuursi. Walaalahayow ha la taageero Awdal State.
Walaalahayow diida heeryada la ina saarey ee ah taalada SNM ee laga taagey dugsiga Sheekh Cali Jowhar. Dumiya oo geeya Hargeysa. Banaanbaxa oo diida magac-xumida la ina saarey. Wax badan waan qabsan karnaa hadii aan isku duubanahay ee midnimada ogaada. Shisheeya kalkaalka Gadabuursi runta u sheega oo ha la joojiyo amma ha u guuraan Hargeysa. Dhamaanteen waxa maanta ina saarani waa dumista taaladaa huwan sharaf xumida Gadabuursi.
Midnimadeenu waa guusheena.
This post has been viewed 1266 times.Gaadhsi Dadka:MoreEmailLike this:Like Loading...